June 7, 2019 June 7, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on काठमाडौमा अनौठो घटना : श्रीमान् नहुदा श्रीमतीले अर्कै युवासँग यौन सम्पर्क गरेको भिडियो खिचिन जव श्रीमानले मोवाइल हेर्दा उडयो होस
कालो कर्तुत जति सुकै गोप्य राख्न खोजेपनि लुक्दैन भन्ने भनाई नै छ । यसैले अपराध हज्जार बर्षपछि भएपनि एकदिन न एकदिन खुलेरै छोड्छ । यहाँ गलत कर्मको खुलासा मात्र भएन । अनौठो तरीकाको अपराधको खुलासापनि भयो । शान्ति र अर्जुन (नाम परिवर्तन) पाँच वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बसे। मजदुरी गर्दै हिँडेका उनीहरू कालिमाटीमा भेट भएपछि सँगै जीउने सँगै मर्ने वाचा कसम खाए ।
आर्थिक रूपमा अलि सम्पन्न भएपछि विवाह गर्ने भन्दै अर्जुनले शान्तिलाई थमथमाउन थाले । सँगै बस्दा उनीहरूका दुई सन्तान पनि भए । शान्तिलाई छाडेर अर्जुन अर्की युवतीसँग बस्न थाले । अघिल्लो महिना रुँदै शान्ति कालिमाटीस्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा पुगिन् । दुई बच्चा बोकेर प्रहरी शरणमा पुगेकी शान्तिले अर्जुन र आफूबीच कानुनी विवाह नभए पनि सँगै बस्दा बालबच्चा जन्मेको इतिवृत्तान्त बताइन् ।
विवाहको प्रमाण नहुँदा प्रहरीलाई अर्जुनबाट केही सम्पत्ति शान्तिलाई दिलाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । अर्जुन र शान्तिजस्ता लिभिङ टुगेदरमा बसेका धेरै जोडी वैवाहिक सम्बन्ध कायम गराउन भन्दै प्रहरीमा धाउने क्रम बढेको छ ।महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले पछिल्लो समय लिभिङ टुगेदर ठूलै समस्याका रूपमा देखा परेको बताए ।
कालिमाटीस्थित केन्द्रमा अरू थुप्रै उजुरी एवं गुनासो आउने गरेको छ। खासगरी विदेशमा केही वर्ष काम गरेर फर्केका युवाले यस्तो समस्या लिएर आउने गरेको एएएसपी पोखरेलले जानकारी दिए ।
एसएसपी पोखरेलका अनुसार श्यामका जस्तै समस्या लिएर दिनहुँ युवा प्रहरीमा धाउँछन् । उनले भने, ‘विदेश जाँदा एउटा सपना र खुसी हुन्छ, फर्किएपछि पीडा मात्रै देखिन्छ युवामा। यो समस्या अहिले जटिल बन्दै गएको छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अझ डरलाग्दो विषय त परपुरुषसँग शारीरिक सम्पर्क राखेर फोटो र भिडियो खिचेपछि बार्गेनिङका लागि बलात्कार गर्‍यो भन्ने घटनासमेत अहिले काठमाडौंमा व्यापक देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार गोंगबुस्थित एक गेस्ट हाउसमा जानकी र कौशल (नाम परिवर्तन) ले सहमतिमै यौनसम्पर्क राखे । उनीहरू दुवैको जीवनसाथी भने फरक–फरक छन् ।
आफैं हेर्ने र डिलेट गर्ने सर्तमा शारीरिक सम्पर्क गर्दाको फोटो र भिडियोसमेत उनीहरूले खिचे । भिडियो कौशलले तत्कालै डिलेट गरे तर जानकीले गरिनन् । विस्तारै जानकीले कौशलसँग पैसा माग्न थालिन् । भनेको समयमा भेट्न नपाएपछि उनी प्रहरीमा पुगिन् ।
आफूलाई फकाएर शारीरिक सम्पर्क गरेको र पछि धम्क्याउन थालेको भन्दै जानकीले कौशलविरुद्ध उजुरी हालिन् । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले यो घटना अनुसन्धान गर्न परिसरलाई पठायो । झापा घर भएर काठमाडौं बस्ने रीता ९नाम परिवर्तन० ले श्रीमान् नभएका बेला अर्कै युवासँग शारीरिक सम्पर्क गरेको भिडियो खिचिन् ।
खाडी मुलुकमा पुगेका श्रीमान् दुई वर्षपछि फर्केर रीताको मोबाइल हेर्दा भिडियो र फोटो देखेपछि उनी मूर्छित बने । पत्नीसँग पारपाचुकेका लागि उनी प्रहरीमा पुगे । यस्ता उजुरी निम्न परिवारदेखि संभ्रान्त परिवारबाट आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। बर्दियाका एक व्यवसायी दम्पतीको सम्बन्ध राम्रै थियो।
दुवैले छुट्टाछुट्टै कार चढ्थ्ये। पत्नीका नाममा पनि केही सम्पत्ति राखिदिएका ती व्यवसायी एकाएक प्रहरीमा पत्नीविरुद्ध उजुरी दिन पुगे। उजुरीमा पत्नी गाडी चालकसँग भागिन् भन्ने थियो। दुवै जना सहमतिमा भागेपछि प्रहरीले के नै गर्न सक्थ्यो र १ व्यवसायीले केहीसीप नलागेपछि पारपाचुके गरे ।
केन्द्रका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म मानव बेचबिखनका चार वटा, बहुविवाहका १७ वटा, घरेलु हिंसाका २० वटा, जबर्जस्ती करणीका ८९ वटा, घरायसी ६ सय वटा र लैंगिक हिंसाका एक सय २० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। घरभित्रै मदिरा सेवन गरेर श्रीमान्र श्रीमतीबीच कुटाकुटका घटना पनि प्रहरीमा आउने गरेका छन् । परिसर प्रमुख एसएसपी पोखरेलले पैसा र सेक्ससँग जोडिएका कहाली लाग्दा घटना प्रहरीमा आउने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कति घटना त सोच्दै नसोचेका पनि भेटिन्छन्।
कोही पैसाका लागि त कोही सेक्सका लागि सम्बन्ध गाँस्ने र पछि उद्देश्य मेल नखाएपछि बार्गेनिङ गरेका घटना पनि छन् ।’ यो सामाग्री सचेतनाका लागि हामीले विभिन्न पत्र–पत्रिकाबाट लिएका हौँ ।
समाजमा यस्ता घटना भइरहेका छन् । जसले अपराध निम्त्याइरहेको छ । सचेत बनौँ । सचेत बनाऊँ । यसका लागि यो सामाग्री सेयर गरिदिनपनि सक्नुहुन्छ ।
गलामा रुद्राक्ष भिरेर रामहरी खतिवडाले भने ‘अब ज्योतिषलाई हैन जनतालाई ढाटने ओलीलाई थुन्नुपर्छ’
June 5, 2019 June 6, 2019 अखवार अनलाइन
के योनिमा वीर्य झार्दा महिलाहरु मोटाउन्छन् त ? यस्तो छ वास्तकिता
March 19, 2019 March 19, 2019 अखवार अनलाइन
शारीरिक सम्पर्कका बेला महिलाहरुलाई किन कण्डमको प्रयोग गर्न मनपर्दैन ?
कुन समयमा महिलालाई बढी यौन चाहाना हुन्छ
April 11, 2019 April 11, 2019 अखवार अनलाइन
January 4, 2018 December 18, 2018 अखवार अनलाइन